IMyuziyam yaBantwana yaseWilmington ngumbutho ongenzi nzuzo oyi-501(c)3 obekwe kumbindi wedolophu iWilmington, NC. Sibonelela ngemeko-bume ekhuselekileyo nebandakanyayo kunye nokufikelela eluntwini apho abantwana banokufunda ngenkuthalo ngokudlala ngokuyilayo nangentelekelelo.
Kungenxa yakho le nto abantwana ekuhlaleni bethu beqhubeka benendawo ekhuselekileyo nebandakanyayo yokudlala ukuze bafunde.
Enkosi ngenkxaso yenu eqhubekayo kwiMyuziyam yaBantwana yaseWilmington.
Nazi ezinye iindlela onokuthi umnikelo wakho uncede ngayo abantwana kwindawo yethu.
I-$ 100 Ibonelela ngezinto eziyimfuneko kwinyanga enye yeprogram yemfundo yemihla ngemihla (STEM, Art, Literacy).
$500 Inkxaso-mali kuhambo lokuya kwiMyuziyam kubantwana abangama-50 abangafumani nkonzo ngokwaneleyo.
$1,250 Unceda ukunika abantwana imiboniso interactive kunye zemfundo.
$2,500 Ixhasa isiphiwo sethu esiza kuqinisekisa ukuba izizukulwana ezizayo ziya kukwazi ukonwabela iMyuziyam.
Abafundi boBomi beFoster
I-$ 5,000 igcina iinkqubo zokufikelela kwiiMyuziyam zonyaka omnye kwimibutho efana ne-Smart Start, i-MLK, i-Nourish NC, kunye ne-Brigade Boys & Girls Club.
I-Endowment Fund ye-CMoW yasekwa ngo-2009 njengomthombo wanaphakade kunye nenkxaso-mali esisigxina yokuxhasa i-CMoW.
IMyuziyam yaBantwana yaseWilmington inochulumanco ukwazisa ukuba sifikelele kwiNjongo yethu yoMngeni woMdlalo we-Endowment e-$25,000. UNed noMargaret Barclay baseka iMyuziyam yaBantwana yaseWilmington Endowment Fund kwiminyaka eliqela eyadlulayo. Ngo-2018, banikezela ngesisa kakhulu umceli mngeni womdlalo weedola ezingama-25,000.
“Abaxhasi abacingayo nabangenakugungqiswa njengoNed noMargaret basisiseko sempumelelo yezemali yeMyuziyam, sibulela kakhulu ukuba nabo njengabaxhasi,” utshilo uJim Karl, owayesakuba nguMlawuli oyiNtloko we-CMoW.
I-Endowment Fund ye-CMoW yasekwa ngo-2009 njengomthombo wenkxaso-mali engapheliyo nesigxina ukuxhasa i-CMoW. I-North Carolina Community Foundation ilawula ingxowa-mali ye-CMoW.
"Saqala ukuxhasa iMyuziyam yaBantwana kwiminyaka emininzi eyadlulayo xa sasinabazukulwana abancinci kwaye sabona inzuzo yamava amaninzi awahlukeneyo abawathandayo. Siye sancedisa ukuseka iMyuziyam yaBantwana yaseWilmington Endowment Fund xa safumanisa ukuba ingxowa-mali enjalo iya kunika iMyuziyam umthombo ongunaphakade wengeniso efunekayo kwixesha elizayo."
Enkosi uNed noMargaret Barclay!
Siyibulela kakhulu inkxaso yenu, enkosi!